ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနှင့် အိမ်တစ်လုံးဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနှင့် အိမ်တစ်လုံးဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ
10 Aug 2018 12:40 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
7182 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
ဗဟုသုတ |	Posted by စည်သူအောင် (iMyanmarHouse.com)
လူဦးရေ ထူထပ်လှသော ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးတွင် သင့်တင့်မျှတပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်သည့် လူနေတိုက်ခန်းများစွာဆောက်လုပ် ရောင်းချပေးနေပြီဖြစ်သည်။
အလွှာအသီးသီးမှ လူတန်းစားမျိုးစုံတို့သည် ကိုယ်ပိုင်အိမ်နှင့် နေနိုင်ရေးတွင် ဘဝ ပန်းတိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကြီးတွင် အိမ် ဘယ်လို ဝယ်ယူနိုင်မလဲ ဆိုသည့် အချက်များအား ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
(၁) ဝင်ငွေထွက်ငွေကို အရင်စီစစ်ပါ
ဝန်ထမ်းဝင်ငွေနှင့် ကိုယ်ပိုင် တိုက်ခန်းဝယ်ယူရန်စီစဉ်ထားခဲ့သူများအနေဖြင့် မိသားစုတွင်း တလစာ ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေနှင့် တစ်နှစ်စာ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေကို စီစစ်တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုတွက်ချက်မှသာ မိမိတို့ အသားတင်ဝင်ငွေ သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူရန် စီစဉ်ထားသည့် တိုက်ခန်း တန်ဖိုးအား ပေးချေနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(၂)ထွက်ငွေကို အနည်းဆုံးထိ လျှော့ချခြင်း
အသားတင်ဝင်ငွေနှင့် ဝယ်ယူလိုသည့် တိုက်ခန်းတန်ဖိုးကို သိရှိပြီးဖြစ်ပါက မိသားစုအတွင်း မလိုအပ်သည့် အခြားသော အပိုအသုံးစရိတ်များကို လျှော့ချနိုင်အောင် ကြိုးစားရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာလျော့ချရမည်ထွက်ငွေများမှာ .....
(၄)အပိုအဝတ်အစားဝယ်ယူခြင်းများ အစရှိသော ထွက်ငွေများဖြစ်ပါတယ်။
(၃)ဝယ်ယူမည့် တိုက်ခန်းအတွက် အရစ်ကျစနစ်များ စုံစမ်းလေ့လာထားခြင်း
ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားထားပြီဆိုပါက ဦးစွာအရစ်ကျစနစ်နှင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန် မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ချေးငွေများ လျှောက်ထားနိုင်မည်ကို စုံစမ်းလေ့လာရမည်ဖြစ်ပါတယ်။မည်သည့် ဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ဝယ်ယူရမည်ကို လေ့လာရမည်ဖြစ်ပြီး ပေးချေရမည့် စနစ်၏ ခိုင်မာမှုနှင့် မိမိပေးချေနိုင်မည့် ပမာဏကို ပေးနိုင်ဖွယ် ရှိမရှိ တွက်ချက်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုပွိုင့်စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူမည်ဟု စိတ်ကူးရှိပါက စရံငွေ အတွက်သာပေးချေရမည်ဖြစ်သောကြောင့် တိုက်ခန်းတန်ဖိုး၏ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း ကိုသာကြိုတင်ငွေစုထားရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုငွေကြိုစုထားမှသာလျှင် ပရိုမိုးရှင်းနှင့် အခြားသော အထူးအစီအစဉ်များနှင့် ကြုံကြိုက်သည့်အခါ တခါတည်းစာရင်းပေးဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချက်တွေကို သတိပြုပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဆိုပါက ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်းတစ်ခုကို ဝယ်ယူနိုင်ရန် အသင့်အနေအထား ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Credit : Nanmalgyi
တိုက်ခန်း အိမ်ရာ ဗဟုသုတ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေ ဗဟုသုတများ
အိမ်ခြံစည်းရိုးကာရံဖို့အရေး ထောက်ခံချက်တွေ လိုအပ်သေး
အိမ်ပတ်ဝန်းကျင် တွင် မစိုက်အပ်သော အပင်များ ၊ အိမ်ဆောက်ရက် ရွေးနည်း ၊ မသုံးအပ်သော သစ် (၈) မျိုးအကြောင်း .....
အဆောက်အအုံ၏ရှေ့၊ နောက်၊ ဘေး ဘယ်ညာ မြေချန်ထားရှိမှုများ
ဂရန်မြေ နဲ့ လယ်ယာမြေ (ပုံစံ ၇)
ဘိလပ်မြေအရောင်က အရည်အသွေးနဲ့ သက်ဆိုင်မှုရှိသလား???
တိုက်ခန်းဝယ်လျှင် အခွန်ဆောင်ဖို့ လိုပါသလား
ကိုယ်ပိုင် အိမ်တစ်လုံး ဆောက်တော့မည့် သူတွေ သိထားသင့်တဲ့ PAE စနစ်နဲ့ အိမ်ဆောက်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ......
အိမ်မြေအရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်စဉ် ပူးတွဲပိုင်ရှင် ကွယ်လွန်သွားလျှင်
ပင်လယ်ကမ်းခြေနားမြေကွက်များရောင်းရန် 1ဧက $120
သံတွဲ | ရခိုင်ပြည်နယ်
မြေကွက် ၊ ခြံကွက်
120 သိန်း (ကျပ်)
သင်္ယန်းကျွန်းမြို့နယ် AKK Shopping Mallအနီး...
သင်္ဃန်းကျွန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1 ခန်း2ခန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1 ခန်း 1 ခန်း
460 သိန်း (ကျပ်)
270 သိန်း (ကျပ်)
SBC Offiec Tower for Rent at Uwisara Road.
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း
$ 1 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
0 သိန်း (ကျပ်)
မြောက်ဥက္ကလာပ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
5 သိန်း (ကျပ်)
လမ်းမတော် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3.50 သိန်း (ကျပ်)
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်
အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို အီးမေးလ် ဖြင့် ဖတ်ရန်
အီးမေးလ် (သို့) ဂျီမေးလ်